Ny LAM Mozambique Airlines dia hivarotra ny fiaramanidin'i Embraer amina hetsika fandaniam-bola
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny LAM Mozambique Airlines dia hivarotra ny fiaramanidin'i Embraer amina hetsika fandaniam-bola
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Mozambika • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Airctaft LAM Embraer-190
Tsy misy dikany fa orinasa kely toa ny LAM dia manidina fiaramanidina manana marika telo ka hatramin'ny efatra samy hafa.
Ny fivarotana dia ahafahan'ny orinasa miasa amina karazana fiaramanidina roa farafaharatsiny.
Ny sambo misy ny LAM dia misy fiaramanidina enina avy amina mpanamboatra telo samy hafa.
Tsy nomen'ny mpandrindra IGEPE ny isan'ny fiaramanidina rehetra tafiditra amin'ny varotra.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, NY M - kaompaniam-pitaterana sainam-pirenen'i Mozambika, mikasa ny hivarotra ny fiaramanidiny Embraer mba hampihenana ny vidin'ny asa sy hampanara-penitra ireo andian-tsambony.
Ny sambo misy ny LAM dia misy fiaramanidina enina avy amn'ny mpanamboatra telo samy hafa, ny roa amin'izany dia ny fiaramanidina Embraer-190 novokarin'ny kaominaly aoropeana Breziliana Embraer SA
"Tsy misy dikany fa ny orinasa kely toa ny LAM dia manidina fiaramanidina manana marika telo ka hatramin'ny efatra samy hafa," hoy i Raimundo Matule, mpitantana ny Institute for the Management of State Holdings (IGEPE), niaiky fa miatrika olana ara-drafitra ilay kaompaniam-pitaterana .
Ny administratera IGEPE dia tsy nanome ny isan'ny fiaramanidina tena handray anjara amin'ny varotra, fa nilaza kosa fa ny fihenam-bidy dia mitaky fandanjalanjana vola be, ary hahafahan'ilay orinasa miasa amina karazana fiaramanidina roa farafaharatsiny.
Ny IGEPE dia nanindrona meticais 700 tapitrisa (maherin'ny 11 tapitrisa dolara amerikana) tamin'ny taona 2020 tao amin'ny kaompaniam-pirenena, izay nitotongana ny vola azony noho ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19.